တိုင်းရင်းသားရိုးရာအစားအစာတွေကို တစ်နေရာတည်းမှာရနိုင်မယ့် Peace Traditional Foods…. – FoodiesNavi
တိုင်းရင်းသားရိုးရာအစားအစာတွေကို တစ်နေရာတည်းမှာရနိုင်မယ့် Peace Traditional Foods….
By yin sandi On January 11, 2018 0
ကချင်ရိုးရာအစားအစာ ၊ ရှမ်းရိုးရာအစားအစာဆိုပြီး သီးခြားဆိုင်တွေများစွာရှိပေမယ့် တိုင်းရင်းသားရိုးရာအစားအစာမျိုးစုံရနိုင်တဲ့ ဆိုင်ကတော့တော်တော်ကိုရှားပါတယ်။? ? ? ? ရှားပါးဆိုင်တွေထဲကမှ ? ? Foodies Navi ကနေ တစ်ဆိုင်တည်းမှာတင် တိုင်းရင်းသားရိုးရာအစားအစာများစွာ? ? ? ? ? ? ရရှိနိုင်တဲ့ Peace Traditional Foods ဆိုင်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ? ? ဒီဆိုင်မှာဆိုရင်တော့ မြန်မာ့ရိုးရာဟင်းလျာတွေနဲ့ တရုတ်အစားအစာတွေအပြင်? ? ? ? ? ကချင်ရိုးရာအစားအစာ ၊ ရှမ်းရိုးရာ၊ အစားအစာ ၊ ရခိုင်ရိုးရာအစားအစာတွေနဲ့ မွန်ရိုးရာအစားအစာတွေကို တစ်စုတဝေးတည်းရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ? ? ? ဒီလိုထူးခြားတဲ့ဆိုင်လေးရဲ့ တည်နေရာကတော့-?
–အမှတ်(၁၉၇) ၊ ဧရာဝတီလမ်း ၊ ကျောက်မျက်ဥယျာဉ်(အနောက်ဘက်) ၊ သပြေကုန်း ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် ၊ နေပြည်တော် ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Peace Traditional Foods မှာရရှိနိုင်တာတွေကတော့ – ? ? ? ? ? လက်ပံပြားကြက်ကြော် ၊ ကြက်ကြော်သုပ် ၊ ကြက်ကာလသားချက် ၊ ကြက်အူကာလသားချက် ၊ စစ်ကိုင်းထမင်းသုပ် ၊ ကြံခင်းထမင်းသုပ် ၊ မုန့်ဟင်းခါး ၊ ပဲပြုတ်ထမင်းကြော် ၊ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ ၊ နန်းကြီးသုပ် ၊ နန်းပြားသုပ် ၊ ဆီချက် ၊ ကြက်/ဝက်ကချင်ချက်၊ကြက်ဆန်လှော်ချက်၊ဝက်မိုးလွတ်ဆီဆမ်း၊ထမင်းပေါင်း၊အသားကင်၊နံကင်၊အခေါက်ကင်၊ကရင်တာလပေါဟင်းချို၊ကရင်ကြက်ကာလသားချက်၊မွန်ငပိထောင်း၊မွန်ကြက်စင်းကော၊မွန်ဘဲဥနှင့်အာလူးချက်၊ကြက်သောက်ဆန်း၊ငါးရခိုင်ချက်၊ဝက်သားရခိုင်သုပ်၊ပြည်ကြီးငါးရခိုင်ချက်၊ငါးပေါင်း၊ငါးနီတူရခိုင်သုပ်၊ရှမ်းဝက်သားပေါင်း၊ရှမ်းဝက်မုန်ညင်းချက်၊ရှမ်းဝက်လက်ပေါင်ချက်၊ရှမ်းပုဇွန်မုန်ညင်း၊ရှမ်းနံရိုးပေါင်းချဉ်စပ်၊ယိုးဒယားပဲကြာဇံသုပ်စတဲ့ဟင်းလျာတွေကိုအများကြီးကိုစိတ်တိုင်းကျစားသုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။???
ဟင်းလျာတွေနာမည်တွေကိုကြားရုံနဲ့ ပြေးစားချင်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေပြီလား??? ? ? ဒါတောင်အကုန်မဖော်ပြထားရသေးဘူးနော်။ ဟင်းလျာစုံသလို အရသာကလည်းလုံးဝရှယ်ပဲနော်။ ? ?ကျယ်ဝန်းတဲ့နေရာထိုင်ခင်းကြောင့် သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသလို အဖွဲ့အစည်းလိုက်သွားရောက်သုံးဆောင်လိုသူများအတွက်လည်း အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။? ? လတ်ဆတ်သန့်ရှင်းတဲ့အစားအသောက်တွေနဲ့ ထူးထူးခြားခြား တိုင်းရင်းသားရိုးရာအရသာတွေကြောင့် စိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝရရှိစေမှာပါ။? ? ? ဒီတော့ နေပြည်တော်ကစားသောက်ဆိုင်တွေထဲမှာ မဖြစ်မနေသွားစားသင့်တဲ့ ဆိုင်လေးအဖြစ်မှတ်ထားလိုက်တော့နော်။???
Image Source : www.facebook.com/peacetraditionalfoods
In Restaurant Guides Tagged Chinese Foods, Kachin foods, Kayin Foods, Mon Foods, Myanmar Food, Shan foods Leaveacomment
ထိုင်းအရသာမြည်းစမ်းရင်း Amazing ဖြစ်သွားစေဖို့ ??? Amazing Thai Food ရှိတယ်နော်???